Hogaamiyihii Alshabaab ee Puntland oo iska dhiibay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Hogaamiyihii hore ee bilaabay furunta dagaal ee Alshabaab ka fureen Puntland, Maxamed Saciid Atam ayaa isu dhiibay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, wuxuuna shaaciyey inuu ka baxay Alshabaab.
Munaasabad lagu soo bandhigay hogaamiyahan ka tirsanaa Al-Shabaab, fadhigiisuna horay u ahaa buurladeyda Galgala ee gobolka Bari ayaa lagu qabtay xarrunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
Maxamed Saciid Atam oo ay aad u ilaalinayeen ciidamada nabadsugidda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in uu ka baxay Alshabaab kadib markii sida uu yiri hogaamiyaha ururkaas Axmed Cabdi Godane uu is laheysiiyey jihaadka sida uu yiri.
Wuxuu sheegay Atam in isagu ka horjeeday maamulkii Faroole, hase ahaatee markii Alshabaab tageen buuraleyda Golis isaga lagu qasbay inuu hubka wareejiyo kana tago halkaas.
“Anigoo ah Sheikh Maxamed Siciid Maxamed (Atom), waxaan u hayaa shacabka Soomaaliyeed farriin muhiim ah. Waxaan in muddo ah u dulqaadanayey qaladka Axmed Cabdi Godane iyo shabakadiisa ay ku hayaan shareecada Islaamka iyo dadka muslimiinta ah” ayuu yiri Maxamed Saciid Atam moo warbaahinta kula hadlay Muqdisho.
“Waxaan maanta go’aansaday inaan iskaga tago Xarakada Al-Shabaab arrimo badan awgood, waxaana ka mid ah in dhalinyarada loo sheegay in loo dagaalamayo iskuxirka shareecada islaamka, dadkana waxbay ka xukumaan, haddana Axmed iyo shabakadiisu shareecada ma qabato umana hogaansamaan” ayuu yiri Atam.
“Waxey baneysteen dhiiga shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah, sidaas darteed waxey ku laayaan suuqyada, jidadka ilaa masaajidka. Waxey baneysteen dhiiga Culumada Muslimiinta iyo qof kast oo muhiim ah oo ay mas’alo isku khilaafaan, ilaa culumada ku dhex laayaan masaajida dhexdeeda” ayuu sidoo kale yiri hogaamiyihii hore ee dagaalyahanada Galgala.
“Jihaadku waa cibaado Allaah baa iska leh, waa wax laga doonaayo muslimiinta oo dhan, weliba iyagoo isku duuban. Axmed Cabdi waxa uu ka dhigtay wax uu isaga iska leeyahay, sidaas daraadeed, waxuu amar ku bixiyey in la laayo, hubkana laga qaato cidii kale ee hub qaadata, waxeyna ka dhigaan mid ay dilaan, mid ay xiraan, mid ay duleeyaan iyo mid iskaga carara. Xagga shacabka qaxa iyo rafaadka ay ku jiraan wax naxariis ah uma hayaan, waxeyna ku sameeyaan, cunaqabateyn dad maato ah oo muslimiin ah oo tabaaleysan” ayuu mar kale yiri Atam.
Maxamed Saciid Atam ayaa la hadlay dhallinyarada ku jira Alshabaab, wuxuuna sheegay in qofkii ururkaas ka baxa uusan aheyn qof ka baxay diinta Islaamk.
“Waxaan u sheegayaa dhalinyarada qofka Shabaab ka tagay, ma aha qof islaanimada ka tagay, qofkii fikirkooda dhaliilana ma aha qof diinta islaamka wax ka sheegay. Maxaa yeelay, islaanimadu waa diin ee ma aha dad gaar ah fikirkood” ayuu yiri Atam.
“Dadka muslimiinta ah waa ay is khilaafi karaan, laakin ilaahay waxuu amray inay kitaabka iskula noqdaan iyaguna midoobaan, labadaas arrimood Axmed iyo shabakadiisa waa lagala quustay. Midnimo umadeed iyo marjac kitaab midna ma rabaan, Sidaas daraadeed, waxaan tuhunsanahay inaanay ka marnayn dano shisheeye” ayuu Atam kusoo gebagebeeyey hadalkiisa.
Hogaamiyahan hore ayaa soo shaac baxay sanadkii 2010, islamarkaana hogaaminayey koox hubeysan oo Islaamiyiin ah oo saldhiga ka dhigtay gobolka Bari ayaa la sheegay inuu dhawaan isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya, inkastoo aan laga warheyn qaabka uu isu soo dhiibay.
Maxamed Saciid Atam ayaa sanadkii 2012 booskiisa hogaamiyaha Alshabaab u dhiibay nin lagu magacaabo Yaasiin Kilwa, kaasoo cod uu soo duubay beyco la galay amiirka Alshabaab.